घाँटीमा अडकेको माछाको काँडा कसरी हटाउने ? - Varient - News Magazine
घरमा सबैजना सँगै खाना खान बसेका हुन्छौ। बेलुकाको खानामा माछाको ग्रेभी पनि खाने गरिन्छ। माछाको स्वादको आनन्द लिदा लिदै माछाको काँडा घाँटीमा अडकिन् सक्छ। सोही समयमा, घाँटीमा अड्किएको काँडाले निराश बनाउन सक्छ। वास्तवमा, यस किसिमको समस्या कुनै आश्चर्यको कुरा होइन जहाँ माछा खाइन्छ।
तर केहि मानिसहरु घाँटीमा केहि अड्किदा एकदमै चिन्तित हुन्छन् र डराउँछन् किनकि उनीहरुलाई घाँटीबाट काँडा कसरी हटाउने भनेर थाहा हुँदैन। जबकि घाँटीमा अडिएको माछा को काँडा हटाउन गाह्रो छैन। हामी यस लेखमा माछाको काँडा हटाउन को लागी केहि सुझावहरु दिदैछौ।
१.घाँटीमा माछाको काँडा अड्किएमा चर्को वा बेसरि खोक्ने प्रयास गर्नुहोस।
धेरै पटक माछाको काँडा हाम्रो घाँटी को पछाडि टन्सिल वरिपरि अडकिन् सक्छ। यदि तपाईं घाँटीमा काँडा अड्किरहेको महसुस गर्नुभयो भने जति सक्दो चाँडो, र धेरै पटक खोक्ने वा लामो लामो सास लिने प्रयास गर्नुहोस। त्यसपछि घाँटीमा अडकेको काँडा खोकी को कारण घाँटी बाट बाहिर निस्कन सक्छ।
२.घाँटीमा माछाको काँडा हटाउन जैतुन वा अलीभ तेल पिउनुहोस्।
जैतुनको तेल एक प्राकृतिक स्नेहक हो। यदि माछाको काँडा तपाईंको घाँटीमा अड्किएको छ भने, एक वा दुई चम्मच जैतूनको तेल पिउनुहोस्। यसले तपाईंको घाँटी र माछाको काँडा मा लुब्रिकेसनको लेयर सिर्जना गर्दछ। यसले काँडा सजीलै हटाउन मद्दत गर्नेछ। यदि काँडा निल्दा भित्र पस्दैन भने, जैतुन को तेल पिएर केहि समयपछि बेसरि खोक्नुहोस काँडा कोमल भइसकेको कारण, यो सजिलै घाँटीबाट बाहिर आउँछ।
३.माछाको काँडा घाँटीमा अड्कियो भने केरा खानुहोस।
केही मानिसहरू माछाको काँडा आफ्नो घाँटी मा अड्किदा केरा खाने गर्दछन। वास्तवमा, केरा खाँदा, यो पेटमा जानु भन्दा अगाडी घाँटीमा रहेको माछाको काँडा केरामा पस्छ र सजिलै हाम्रो पेट भित्र जान्छ। यसका लागि केराको ठूलो गाँस बनाउनुहोस् र एक मिनेटको लागि यो मुखमा राख्नुहोस्। यसले मुखमा लार वा रयाल् को स्राव बढाउँदछ। जब तपाईं केरा निल्नुहुन्छ, माछाको काँडा पनि यसको साथमा भित्र जान्छ।
४. यदि माछाको काँडा घाँटीमा फस्यो भने भिनेगर पिउनुहोस्।
माछाको काँडा हटाउन को पातलो सिरका वा भिनेगर सेवन गर्न सकिन्छ। यद्यपि, पातलो भिनेगरले घाँटीमा फसेको माछाको छेस्को हटाउन कसरी मद्दत पुर्‍याउँछ भनेर यसमा कुनै अनुसन्धान गरिएको छैन। तर केहि मानिसहरू विश्वास गर्छन् कि भिनेगर र पानीको मिश्रण पिउँदा घाँटीमा अड्किएका माछाको काँडा हरू विघटित हुन्छन्।
हामी तपाइलाइ भनछौ कि माछाको हड्डी एकदम नाजुक हुन्छ जबकि भिनेगर भनेको एसिड हो। तसर्थ, यो विश्वास गरिन्छ कि भिनेगरले पेटको एसिड प्रक्रियालाई छिटो बनाई माछाको काँडा विघटन गर्न मद्दत गर्दछ। यद्यपि यस प्रक्रियालाई अन्य विधिहरू भन्दा लामो समय लिन सक्दछ।
५. घाँटीमा अडकेको माछाको काँडा हटाउन मन तातो पानीमा ब्रेड मिसाएर खानुहोस।
यो प्रक्रिया पनि केरा खाने प्रकिया जस्तै हो। यसको लागि, एउटा ब्रेड लिनुहोस् र यसलाई मनतातो पानी वा दूधमा मिलाउनुहोस्। जब ब्रेड गल्न थाल्छ अनि ब्रेड र पानी पिउनुहोस्। यस तरीकाले, रोटी र दूध वा पानीको साथसाथै, माछाको काँडा पनि पेट भित्र जान्छ।
केही व्यक्तिहरुले घाँटीमा केहि खाने कुरा अल्झियो भने औंलाले निकाल्न प्रयास गर्छन, र त्यसको नतिजा घाँटी दुख्छ घाँटीबाट रगत आउँछ र पिडा हुन सक्छ। त्यसकारण त्यस्तो प्रयास नगर्नुहोस्। यसको सट्टा माथी उल्लेखित उपायहरूको मद्दत लिनुहोस्। जसले सजिलै घाँटीमा अडकेको खाना निकाल्न वा निल्न सहयोग गर्दछ।